Maxaad ka taqaanna madaxda Taalibaan ee loo magacaabay dowladda cusub ee Afghanistan? | Star FM
Home Caalamka Maxaad ka taqaanna madaxda Taalibaan ee loo magacaabay dowladda cusub ee Afghanistan?
Maxaad ka taqaanna madaxda Taalibaan ee loo magacaabay dowladda cusub ee Afghanistan?
Kooxda Taalibaan ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay dowlad cusub oo ku meel gaar ee Afghanistan, toddobaadyo uun ka dib markii ay xukunka dalkaasi la wareegeen.
Haddaba maxaa laga ogyahay taariikhda labada mas’uul ee ugu sarreeya maamulka cusub ee ku meel gaarka ah.
Mullah Maxamad Xasan Akhund, oo ku jira liiska cunaqabateynta qaramada midoobey, ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha dowladda cusub ee ku meel gaarka ah, waxaa uuna ka mid yahay asaaseyaashii ururka Taalibaan.
Waxaa uu xiriir dhow iyo la taliye siyaasadeed u ahaa Mullah Cumar ahna aasaasihii xooggaga Taalibaan.
Waxaa uu soo noqday xubin ka tirsan golaha sare ee kooxdaan, waxuuna ahaa wasiirkii ku xigeenki arrimaha dibadda ee xukuumaddii ugu horreysay Taalibaan.
Waxaa uu ka soo jeeda magaalada Kandahar oo ah meeshii lagu aas-aasay kooxda Taliban..
Waxaa uu horay u soo noqday guddoomiyaha Taalibaan ee gobolkaasi.
Mullah Maxamad Xasan Akhund ayaa sidoo kale soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo ra’iisul wasaare ku -xigeenkii xilligii ugu horreysay ee Taalibaan ay awoodda Afghanistan maamulayeen ee intii u dhaxeysay sanadihii 1996-dii-2001-dii.
Waxaa ku xigeen looga dhigay Cabdul Ghani Baradar oo isna wax ka asaasay ururkan.
Dowladda cusub ee Taalibaan ayaan lagu soo darin wax dumar ah.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in Maxamad Xasan Akhund uu ahaa mid ka mid ah taliyayaashii ugu saameynta badnaa ee Taaliban.
Cabdul Ghani Baradar oo ah hoggaamiye ku xigeenka dowladda cusub ee Afghanistan wuxuu ku barbaaray gobolka Kandahar.
Sida dadka reer Afghanistan ay badankoodu qabaan, nolosha Baradar ayaa wax iska beddeshay markii ciidamadii Soofiyeeti ee sannadihii 1970-meeyadii dullaan ku qaadeen Afghanistan, markaasi oo u noqday dagaalyahan kasoo horjeeday ciidamada ku soo duulay dalkaasi.
Waxaa la rumeysan yahay inuu ka garab dagaallamay aasaasihii Taalibaan, Mullah Cumar.
Labada mas’uul ayaa la sheegay inay ahaayeen madaxdii ugu horreysay ee aas-aastay kooxda Taaliban horraantii 1990 -meeyadii intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee ka dambeeyay ka bixitaankii ciidamadii Soofiyeeti
Baradar ayaa la sheegay in afgambigii Mareykanka uu ka mid ahaa koox yar oo ka tirsan Taalibaan kuwaas oo u tagay hoggaamiyaha ku-meel-gaarka ee dowladda cusub ee Afghanistan oo xilligaasi loo magacaabay Xamid Karzai islamarkaana u soo jeediyay in kooxda Taalibaan ay aqoonsato maamulka cusub.
Bardar ayaa sanadkii 2010-kii lagu xiray dalka Pakistan, isagoo lagu hayay xabsiga ilaa sanadkii 2018-kii markaas uu Mareykanka cadaadis ku saaray dowladda Pakistan in mas’uulkan ay u wareejiso Qatar.
Ka dib markii loo wareejiyay dalka Qatar, waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadeed ee Taaliban, wuxuuna saxiixay heshiiska bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan.
Previous articleDHAGEYSO:22 guri oo lagu gubay ismaamulka Laikipia
Next articleDHAGEYSO:Wakiilka Dadajabula ee Wajeer oo ka hadlay tallaabo uu shalay qaaday barasaabkii hore ee ismaamulkaasi